AKHRISO: Natiijada wareega koowaad ee Doorashada Guddoomiye xigeenka 2aad ee Aqalka sare - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. AKHRISO: Natiijada wareega koowaad ee Doorashada Guddoomiye xigeenka 2aad ee Aqalka sare - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
AKHRISO: Natiijada wareega koowaad ee Doorashada Guddoomiye xigeenka 2aad ee Aqalka sare
Wareegii koowaad ee doorashada Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Aqalka Sare ayaa soo dhammaatay iyadoo la isla aadi doono wareeg saddexaad.
Natiijada wareega kowaad ee doorashada Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Aqalka sare ayaa noqotay sida soo socota:
Cabdikaafi Macalin Xasan 14 Cod.
Fartuun Cabdiqaadir Faarax 12 Cod
Mowliid Guhaad 10 Cod
Hodan Maxamed Cismaan 8 Cod
Sacdiyo xasan cismaan 6 Cod
Iftiin Xasan Baasto 1 Cod.
Waxaa wareega labaad u gudbay afarta musharax ee ugu horeeya oo kala ah:
Wareeg labaad waxaa ku soo baxaya qofkii hela codad ka badan 28 Cod, iyadoo ay si weyn isu hayaan labad musharax ee uu sareeya.
Previous articleTOOS U DAAWO: Doorashada Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Aqalka Sare
Next articleGuddi Culimo ah oo go’aan culus ku riday Dhalinyaradii kufsiga ka geysatay Goldogob